Myanmar Youth Media Club - MYMHOT - Health
Health Everything About Health and How to stay Healthy Tips!	16May
Post Pictures of Food Online? You May have Health Issues သင်က facebook တို့ twitter တို့လို လူမှုကွန်ယက် တွေမှာ အစားအသောက်ပုံတွေ တင်လေ့တင်ထ ရှိသူ တစ်ယောက် လား။ ဒါဆိုရင် သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးမှာ ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိနေနိုင် ပါတယ်။ 271	Continue Reading
Posted in Health 05May
Video Game Sharpens Seniors' Cognitive Skills Road Tour ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းကို ကစားခြင်းဖြင့် အသက်အရွယ် ကြီးသူတွေရဲ့ cognitive skills တွေကို ပြန်လည်ထက် မြက်စေပါတယ်လို့ တွေ့ရှိချက် တစ်ခုက ဆိုပါတယ်။ 124	Continue Reading
Posted in Health 03May
Foods That Bring Acne Relief မျက်နှာပေါ်မှာ ၀က်ခြံ၊ ဆားဝက်ခြံ စတဲ့ အဖုအပိမ့်တွေ လျော့ပါး သက်သာသွားပြီး ကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ ရရှိဖို့ဆို ရင် ဘာတွေကို စားသုံးပြီး ဘယ်အရာ တွေကို ရှောင်ကျဉ် သင့်ပါသလဲ။
359	Continue Reading
Posted in Health 17April
The Science of Six Packs Six Packs တဲ့။ ယောကျာင်္းလေးတွေ အတွက်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ဗိုက်မှာ အဆီထက် စာရင် muscles တွေနဲ့ Six Packs ကို လိုချင် ကြမှာပါ။ ဒါကို ဘယ်လို ရအောင် လုပ်ကြမလဲ။ 1026	Continue Reading
Posted in Health 05April
Testosterone Testosterone Hormone ဆိုတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Hormone တစ်မျိုးကြောင့် အမျိုးသား အများစုဟာ လိင်ကိစ္စ နဲ့ပတ်သက်လာရင် သူငယ်ချင်းရဲ့ လက်တွဲဖော် ကိုတောင် မရှောင်နိုင် ကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ 527	Continue Reading
Posted in Health 28March
Breath Test Can Explain Being Fat အဝလွန်ခြင်းဟာ အစား အများကြီး စားတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း သိပ်မလုပ် တာတို့နဲ့ သိပ်မဆိုင်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းမှာရှိ တဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ အချိုးအစား မညီမျှ တာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
352	Continue Reading
Posted in Health 20March
Junk Foods Make You Grumpier အရင်တုန်းက စိတ်သက်သာ ရအောင်ဆိုပြီး သရေစာတွေ စားပြီး မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဖြေ ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုစားပြီး စိတ်ဖြေတာ ပိုပြီးတောင် ဆိုးစေပါတယ်လို့ တွေ့ရှိထား ပါတယ်။
155	Continue Reading
Posted in Health 16March
Key To Preventing A Stroke နေ့စဉ် ကော်ဖီ တစ်ခွက်နဲ့ green tea လေးခွက် သောက်သုံး ခြင်းက လေဖြတ်ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်မယ့် အဓိကသော့ ချက်တစ်ခု ဖြစ်လာတယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင် တွေက ဆိုပါတယ်။ 197	Continue Reading
Posted in Health 2345 > >> Categories	Superheroes & Characters
Facebook 4DX Coming to Movies Author Administrator	ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး 4DX ရုပ်ရှင်အဖြစ် Iron Man3ဇာတ်ကားကို ပြသဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ပြီး ဒီအပတ်ထဲမှာ စတင်ပြ သတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Read more
4DX Coming to Movies
Toyota i-Road Author Administrator	Toyota က iRoad အမည်ရှိ ဘီး၃ဘီး ပါတဲ့ပေါ့ပါး သွက်လက်စွာ မောင်းနှင်နိုင်မယ့် နှစ်ယောက်စီး EV series စက်တပ် ယာဉ်ငယ်ကို တီထွင်ဖို့ စိတ်ကူး နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Read more
Fix Any Computer Author amedeo	Computer ဘယ်အမျိုးအစားမဆို အဆင့် ၂ ဆင့်ထဲနဲ့ လွယ်လွယ်ကူ ကူ ပြင်လို့ရမယ်ဆိုရင် သင်စိတ်ဝင် စားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ ဒါဆို ရင်တော့ တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။	Read more
Fix Any Computer Valve Gaming Console Author Administrator	Valve ရဲ့ digital game distribution platform ပါတဲ့ PC-based gaming console ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်လာ၁၀၀၀ လောက်ရှိတဲ့ Steam box ကိုကြိုတင်မှာယူ ထားနိုင်ပြီး ခုချိန်မှာရင်တော့ 10% discount ရမှာပါ။	Read more
Content View Hits : 8502617